Col. Cabdulahi Yusuf oo Garoowe dib ugu soo noqday.
Waxaa maanta magaalada Garoowe dib ugu soo noqday Col. Cabdulahi Yusuf axmed ka dib markii uu u soo dhamaaday wada xaajood uu mudo 3 berri ah kula lahaa magaalada Qardho odayaaasha magaaladaas, ku soo noqoshada magaalada Garoowe ee Cabdulahi Yusuf ayaa waxay soo afjartay hawl ciidan oo uu ku hawlanaa mudo ilaa 10 bilood ah, hawlgalkaas milatari ayaa Ciidamada Daraawiishta oo uu hogaaminayo Cabdulahi Yusuf waxay isku mareen magaalooyinka waaweyn ee Puntland marka laga soo bilaabo magaalada Galkacyo illaa magaalada Bosaaso iyagoo kala wareegay maamulka magaalooyinkaas maamulkii Jamac Cali Jamac.
wararka aan ka helay magaalada Garoowe ayaa sheegaya in si aad u weyn dadweynaha magaaladu u soo dhaweeyeen Col Cabdulahi Yusuf iyo saraakiisha ciidamada ee la socday, dadka magaalada ayaa la soo sheegayaa in ay isugu soo baxeen daafaha jidka laamiga ah, wararka ayaa intaas ku daraya in Cabdulahi Yusuf ku degay guriga madaxtooyada oo uu ka maqnaa mudo ka badan sannad, halkaasna uu ku salaamay dadweyne aad u badan oo isugu soo baxay guriga madaxtooyada hortiisa.
waxaa la saadaalinayaa in Col. Cabdulahi iminka ku dhawaaqo Dawladiisa cusub oo looga fadhiyo in ay noqoto mid dib u heshiisiin, una diyaarisa Puntland ka qeybgalka shirka heshiisiinta Soomaaliyeed ee Nayrobi. waxaa kaloo laga filayaa Dawlada Cusub in ay diyaariso doorashooyin cusub si loo soo afjaro loogana gudbo qilaafka siyaasadeed, waxaa iminka gacanta Maamulka Cabdulahi Yusuf ku soo noqotay dhamaan gobolada Puntland ka dib markii saraakiishii maamulkii Jamac Cali Jamac ee ay is hayeen ay u qaxeen magaalada Burco ee Somaliland iyagoo u sii jeeda wadanka Jabuuti oo awalba laga soo abaabulay.
warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Puntland Cabdulahi Yusuf oo nuqul ka mida uu soo gaaray Mudugonline [HALKAAN GUJI-RIIX]